Ụbọchị My Pet » E dị otú ahụ ka A Good Ọgụ Na Relationships?
emelitere ikpeazụ: Jan. 16 2021 | 4 min agụ
Ọ bụ ezie na arụmụka na-atụle ihe ọma n'ihi mmekọrịta, bụ n'ebe dị ka ihe dị ka ezi ọgụ a mmekọrịta? Ee e, unbelievably. Na-alụ ọgụ na-enyere a mmekọrịta na-eto eto dị ka di na nwunye ga-esi mara onye ọ bụla ọzọ mma. Ebe ọ bụ na ọ bụ ihe a na-apụghị izere, di na nwunye mkpa ịmụta otú e si alụ ọgụ pụtara.
Ịmara otú ọgụ pụtara na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa karịa ịmata ihe mere a ọgụ tiwapụrụ na mbụ ebe, ọ bụ ezie na inwe obere ọgụ bụghị odot. Iwepụta oge mgbe otu onye na-ele ka ha na-ida ọ dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụ na ọ dịghị eme otú ahụ pụrụ iduga ndị ka njọ Jeremaya mere nke a gaara ezere.
Na mgbakwunye, ọ dị mkpa na-eme ka ndị ọzọ na onye na-eche na ha na-nụrụ. Unu nwere na-eti mkpu ọkụ, dị ka ọ dịghị mgbe ha na-enyere dozie ihe ọ bụla, dị ka na-adọrọ adọrọ dị ka ọ pụrụ mgbe nile.
Mgbe a agha na onye ibe, -achọ mgbe nile na-edozi agha udo, kama na-alụ ọgụ iji merie. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na nke a bụ mfe karịa ime eme, e nwere di na nwunye nke iwu, nke, ma ọ bụrụ na soro, pụrụ n'ezie ime ka agha kwesịrị ya.
Ejide azụ iwe ga-arụ ọrụ; kama itinye gị iwe gafee onye gị na
Iwe a bụ mmetụta, nke na-egosi ihe mgbu, iru újú, ihere na ọbụna mwute. Ọ nwere ike mere site ihe omume a na mere ogologo oge gara aga ma ọ bụ a ugbu a ihe omume. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-amaghị otú obibi iwe.
Iwe ga-hụrụ dị mkpughe, mmetụta nke na-enyere onye na onye òtù ọlụlụ gbagote na ihe ngwọta na-a nsogbu. Ya mere, na-aṅa ntị na iwe ga-enyere ndibiat kpatara esemokwu nakwa dị ka ihe ngwọta a obere ihe na-adị mfe.
Inye a ala igbu agaghị eme ka otu onye a dike
Arụmụka na-adịghị ụzọ mee ka gị na onye òtù ọlụlụ na-adịghị ike, nzuzo ma ọ bụ ọbụna a gara aga gbasaa. Nke a bụ ala igbu na-egosi na otu onye bụ ma kwa n'uko ha onwe ha na akpụkpọ, Ya mere, -enwe mkpa ọgụ ha na onye òtù ọlụlụ na-eme onwe ha obi mma, ma ọ bụ onye ụjọ nwere na-eche maka esemokwu na-akwụsị a mmekọrịta.
Dị otú ahụ ụjọ Ọrụ mere na ihe n'uche ime ka ọbụna ihe mgbu ndị ọzọ onye kwesịrị izere niile ụgwọ. Kama iti mmadụ n'okpuru belt, na onye kwesịrị nwayọọ ikuku ihe na-ewute ya ma ọ bụ ya. Ugbu a, nke a bụ ihe na-eme ka onye a dike.
Echefukwala na-ekwupụta nchegbu, mmasi, ekele, na ọmịiko
Onye ọ bụla na-enwe agha na ha na onye òtù ọlụlụ na-enweghị na-ekwupụta ihe ọ bụla nke dị n'elu na-eme ihe ọ bụla ziri ezi. Ndị a bụ ndị dị nnọọ mkpa mmetụta uche, karịsịa n'ihi na ndị mmadụ na mmekọrịta, dị ka ndị dị otú ahụ na-ekwupụta mmetụta ndị a ga-enyere hụ di na nwunye mgbe niile nwere ezi ọgụ.
Mmasi na-agụnye ọ bụghị na-eme ka ihe mgbu onye ibe ha n'ihi na ha maara na onye nwere ikike ngosi ọgwụgwọ. Iji ebere na onye, onye nwere anya na a ọnọdụ site na onye nke ọzọ anya.
Unu iti mkpu, mkpu, na ịkparị
Nwere onye ọ bụla mgbe hụrụ onwe ya ma ọ bụ onwe ya na a ọnọdụ ebe ha nwere ike ọ gaghị enyere ma na-ekwu ihe niile na ihe ọjọọ mgbe iwe, ma ha maara na ọ bụ na-ezighị ezi, kama ha bụ ndị kwa na-ewe iwe na-eche echiche? Na-alụ ọgụ ka na onye ọ bụla, karịsịa mgbe na-alụ ọgụ emegbu.
Ọ dị mkpa ka gị oge tupu-aza iwe. Atụla kwa ngwa ngwa na-ekwu okwu dị ka okwu ga-blurted na ike mgbe a azụ, n'agbanyeghị ihe. Na-eti mkpu onye ngụgụ si na okwu mkparị onye onye-eduga naanị ọnwụ nke onye olu, aza elu na ụmụaka na-eleghị anya ndị ọzọ obi.
Unu na-alụ ọgụ na ebumnuche iji merie ma ọ bụ na-ahụ otu on nri
Mgbe na-alụ ọgụ na onye ibe, adịghị agbalị otú ike ga-eto eto, dị ka onye na-eme nke a pụrụ nnọọ ịbụ onye na-ezighị ezi. Ịgbalị ike otú ziri ezi dị nnọọ na-aga na-egosi ndị mmetụta nke erughị eru, ahụ ụdị ndị bụ ndị na-achọ na-ezighị ezi.
Gịnị bụ ojiji nke na-emeri n'ọgụ, ma adịkwa onye ibe? Ọ bara uru ọ na-? Otu na-ekwesịghị otú kweghịzikwa na-emeri n'ọgụ na ha na-ahụ otú ihe ha na onye òtù ọlụlụ na-emetụta. Ọ na-ewe mgbalị dị ukwuu ịdọrọ a obere na-amata ọnọdụ, ịhụ otú otu nwere ike mee ka esemokwu.
Anwala enye constructive nnyocha, ọ ga-arụ ọrụ!
Mgbe na-alụ ọgụ, adịghị akatọ ndị ọzọ ibe, eche na ọ na-enyere ha n'ihi na ọ bụ. Onye ọ bụla na-a agha kwesịrị nnọọ iwe, na ihe ọ bụla na-akatọ nyere n'ebe a pụtara na-akpatara mgbu. Naanị ihe a ka oji bụ ime ka onye òtù ọlụlụ na-eche dị ka ha mere ihe na-enweghị mgbaghara na-apụghị ịghọta aghọta.
Kama, ọ bụ ihe amamihe mkpesa nke ọzọ ibe site n'ịgwa ha ihe ha onye ga-n'anya na-ahụ na-eme n'ọdịnihu.
Mgbe niile e kwuru na-eme, otu ihe yiri mgbaaka ezi. E nwere ihe dị otú ahụ dị ka ọgụ ngosi, nke dị ezigbo mkpa n'ihi na ndị mmadụ na mmekọrịta. Onye nwere ịmụta ihe n'aka ha mejọrọ site ịghọta bụghị naanị ihe ha nwere ike ime iji na-amalite agha, kamakwa ihe ha nwere ike ime iji mee ka ọ ka mma na-eme n'ọdịnihu. Onye ọ bụla bụ ike ịmụta ihe ọma na ngosi ọgụ nkà bụ n'aka na-enwe nnọọ ogologo ma na-enwe obi ụtọ ná mmekọrịta.
N'ihi na Ịhụnanya nke a Pet
Olee otú ịkọrọ unyi na a Mmekọrịta
5 Echiche Ụgha dị dịwara Nke Onye ọ bụla na-eche bụ eziokwu
Online dịwara: Izere Being Catfished